सीमा नक्सामा परिवर्तन नगरिएको भारतको दाबी ! SULSULE:A Truly Nepali News Portal
सीमा नक्सामा परिवर्तन नगरिएको भारतको दाबी !
नयाँ दिल्ली, कात्तिक २२
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको छ । जम्मु र काश्मिरलाई केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याएपछि जारी गरिएको नक्सालाई लिएर नेपालको तर्फबाट चर्को विरोध भएपछि भारतीय पक्षले नेपालसँगको सिमानामा कुनै फेरबदल नभएको दाबी गरेको हो ।
एएनआईका अनुसार कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतले आफ्नो क्षेत्रमा परेको भन्ने समाचारको भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार खण्डन गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सिमाना निर्धारणका लागि छुट्टै संयन्त्र र व्यवस्था रहेकाले त्यही अनुसार हुने स्पष्ट पारे ।
उनले कुनै विवाद वा समस्या रहेमा दुवै देशकाबीचमा वार्ता र छलफल गरेर समाधान निकालिने र एक अर्कामा स्पष्ट हुने पनि जानकारी दिए । दुवै देशको सरोकारका विषयमा दुईपक्षीय हित र मित्रताकै आधारमा टुङ्गोमा पुगिने प्रवक्ता कुमारले पत्रकारहरूलाई बताए । ‘नेपालसँगको सिमानामा पूरानै व्यवस्था अनुसार सम्बन्ध रहँदै आएको छ, यसमा कुनै हेरफेर भएको छैन,’ प्रवक्ता कुमारले भने ।
उनले आफ्ना निकट छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दोहो-याए । प्रवक्ता कुमारले निहित स्वार्थ बोकेर दुवै देशबीचमा मतभेद पैदा गर्ने कोसिस भइरहेको र यसको विरूद्ध दुवै देशले संयुक्तरूपमा अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताए । (आर्थिक दैनिकबाट)
यातायात क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रगति, आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान